छिनेको हात जोडे डाक्टरले « Loktantrapost
छिनेको हात जोडे डाक्टरले
२९ पुष २०७२, बुधबार १३:२८
विर्तामोड, २९ पुस । काठ मिलमा मजदुरी गर्दा धारिलो बेञ्जोले नाडी छिनिने गरी काटिएर गम्भीर घाइते भएका बुधवारे–१ का ५० बर्षीय हर्कबहादुर सुव्वाको देब्रे हातका टुव्रmा जोडेर वी एन्ड सी हस्पिटलका डाक्टरहरूले जस्ताको तस्तै बनाइदिएका छन् ।
हस्पिटलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. उमेश शर्माले हाल उपचारकै व्रmममा रहेका हर्कबहादुरको हात जोड्ने दुर्लभ शल्यव्रिmया सफल भएको बुधवार जानकारी दिए ।
हर्कबहादुर गत सोमवार विहान बुधवारेको सन्तोष फर्निचर उद्योगमा बेञ्जोले हात काटिएर घाइते भएका थिए । अलिकति छालाले मात्र अड्किएको छिनिएको टुव्रmालाई २ घण्टाभित्रै रगत चुहाउँदै वी एन्ड सी हस्पिटलमा उपचारार्थ लगिएको उनकी पत्नी लीलादेवी सुब्बाले बताइन् ।
दिउँसो १२ बजे प्रारम्भिक जाँचसहित उपचार थालेकोमा ३ बजेदेखि ६ घण्टासम्म लगातार हात जोड्ने अपरेशन गरिएको अपरेशनको नेतृत्व गरेका अर्थोपेडिक सर्जन डा. निराजन पराजुलीले बताए ।
अपरेशनमा एनेस्थिसिया डा. राजु श्रेष्ठ, अर्थोपेडिक डा. आशिष साह, डा. ओमप्रकाश चौधरी लगायतले सघाएका थिए ।
‘अपरेशन सफल भएको भर्खरै ७२ घण्टा मात्र भएको छ’, बुधवार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा डा. पराजुलीले भने–‘यो निकै दुर्लभ अपरेशन हो, उपकरण भयो भने हामी वी एन्ड सीमा ठूला प्रकृतिका उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ ।’
अपरेशनमा माइव्रmोस्कोप र फोर–डी अल्ट्रा साउण्ड (भिडियो एक्स रे) मेशिनको प्रयोग भएको डा. पराजुलीले बताए । ३ करोड मूल्य पर्ने नयाँ मोडेलको माइव्रmोस्कोप मेशिन काठमाडौँका हस्पिटलमा समेत नभएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले दावी गरेका छन् ।
अपरेशन गर्ने डा. पराजुलीका अनुसार हर्कबहादुरको काटिएको हात जोड्न मासु र नसा सिलाउनु परेको छ भने फुटेर झुर्किएका हड्डी हटाएर स्टीलको पाता हाल्नु परेको छ ।
रेडियो विराटका अध्यक्ष तथा हर्कबहादुरका छिमेकी पवन तिम्सिनाले वी एन्ड सीका डाक्टरहरूले अकल्पनीय उपचार सफल पारेको बताए । ‘हस्पिटल ल्याइपुर्याउँदा हर्क दाइको हात छिनेर तुन्द्रुङ्ग झुण्डिएको थियो’, तिम्सिना भन्छन्–‘अहिले उहाँका हातका औँलाहरू चल्न थालिसकेको छ, पत्याउनै गाह्रो उपचार हो यो ।’
आफ्ना पतिको हात काटिएको अवस्थाको वर्णन गर्दा हर्कबहादुरकी पत्नी लीलादेवी पत्रकार सम्मेलनमै भक्कानिएकी थिइन् ।
हस्पिटलका डाक्टर र पत्रकारहरूले खचाखच पत्रकार सम्मेलनमा हर्कबहादुरको पहिले र अहिलेको अवस्थासँगै अपरेशनको भिडियो देखाइएको थियो ।
अर्थोपेडिक सर्जन डा. पराजुलीले हात छिनिएको कुनै पनि घटनामा ८ घण्टाभित्र टुव्रmा हस्पिटलमा ल्याए जोड्न सकिने बताएका छन् ।